FAQ - Shandong okusha Ankai-Kitco Co., Ltd
1.what kuyinto umkhiqizo inzuzo?
New nk CNC wamnquma lathes okuzenzakalelayo (CNC uzama) ukumisa Ukucaciswa ngaphezulu motor kanye zokuvumelanisa ujikelezisa Umhlahlandlela emikhonweni design, kungaba namandla zobuciko asekelayo, ngcono kucutshungulwa rigidity, ukuqinisekisa ukunemba machining bese uphinda ngokunemba; Ithuluzi umshini ifakwe transverse futhi emuva amathuluzi amandla ekugcineni.
Amathuluzi anjalo umshini kufanele abe izici ezilandelayo esemqoka:
1. Inamandla isishingishane Milling ikhono: I-ithambo isikulufa, isikulufa, worm, isikulufa uhlobo izingxenye, kubalulekile ukucubungula ephezulu ukucacisa Kuvunguza inkatho, futhi maholoholo kobuso izidingo Kuvunguza inkatho ukufinyelela ra0.8mm.
Isidingo umshini ithuluzi ezinyakazayo indlela, ukunemba okuphezulu futhi ezinhle ukuzinza ashukumisayo ngentambo SX325 CNC uhambe zonke ngokusebenzisa ingxenye lateral othakazelisayo engeza ngesivunguvungu Milling ithuluzi, ithuluzi transverse ashukumisayo ngokusebenzisa Ukujikeleza cutterhead drive ingxubevange kanzima umsiki ngesivinini (enkulu), umshini ithuluzi lokuphotha drive mshini Ukujikeleza kancane (elisizayo), Z1 kushaft ngokuvumelana workpiece iphimbo noma ukuhola kanye workpiece-eksisi ukunyakaza (okuphakelayo ukunyakaza), a (ukunyakaza ukusika) isivunguvungu milling X1 ezinyakazayo kahle eliphezulu machining ngokunemba high inkatho Helical.
2. High rigidity imoto futhi Milling esiyinhlanganisela processing umthamo:
Igrafu eyodwa izinhlelo zokusebenza kwezokuxhumana, izinto zasendlini, electronics, amathoyizi kanye nezinye izimboni of ubukhulu Ukucaciswa enkulu izingxenye kanye izingxenye, inqubo eyinkimbinkimbi, ukunemba okuphezulu, zidinga machining eziyinkimbinkimbi izimoto, Milling futhi waphenduka, SX325 CNC uhambe zonke izimoto ezinamandla, milling, kungaba ukucubungula ngosayizi. Traditional processing indlela ukusebenzisa zezinombolo ukulawula lathe noma umshini wokugaya, umshini imishini, machining isikhungo umshini amathuluzi, ukusebenza inqubo ukucutshungulwa usuphothuliwe, imishini ubuningi isidingo, nekusebenta ukukhiqizwa uphansi, ngokunemba machining of workpiece izingxenye emva clamping yesibili kunzima ukuqinisekisa.
Igrafu eyodwa: zokuxhumana, izinto zasendlini, electronics, amathoyizi umkhakha izingxenye ejwayelekile (32 mm ububanzi e 20 ukuze Ф Ф)
SX325 turning, Milling, CNC hamba wonke ube rigidity okusezingeni eliphezulu nomunye isikhathi clamping ingafinyelela ukuqina eliphezulu imoto cylindrical workpiece, endface, intambo, ukusika inkatho, nginqume kanye milling ovundlile, imishini, u- nezokugcina ubuso nginqume ngemuva kokuphela ngemuva imishini, u-, isidina nezinye esiyinhlanganisela processing umthamo.
3. Amandla Ukucubungula ngokunemba usinamathelise kushaft izingxenye:
Fig. 2 kuyinto ngobuciko eliphezulu nesicu usinamathelise e wokubacindezela, auto izingxenye, wezokwelapha, zezindiza, Aerospace kanye nezimboni optical.
Figure 2: wokubacindezela, auto izingxenye, wezokwelapha, zezindiza, Aerospace, izingxenye optical umkhakha yoqobo (32 mm ububanzi e 20 ukuze Ф Ф)
Kunzima kakhulu ukucubungula usinamathelise kushaft izingxenye nge eside / ubukhulu isilinganiso phezu 6, kanye ngokunemba kanye kahle kunzima ukuqinisekisa. New nk CNC wamnquma lathes okuzenzakalelayo (CNC ukuhamba zonke) ngoba esiyingqayizivele ukucutshungulwa ubuchwepheshe ezifana ngesivinini Umhlahlandlela zokuvumelanisa ehlathini, workpiece futhi ukusika ithuluzi izingxenye njalo osekelwa Umhlahlandlela emikhonweni, ukuze kungenziwa kusetshenzwe kalula ububanzi kusukela 5 ~ 32 mm, Ubude ngaphakathi 280 mm ultra usinamathelise kushaft izingxenye.
2) isivinini / isikhundla iluphu impendulo usebenzisa izakhi ezintsha ezifana esakhelwe lesinqumo high nehele noma kazibuthe, okuyinto has ephakeme ukulawula ikwazi rotary nempendulo.
3) esimweni double lokuphotha isakhiwo, ephelele ukulandelana ukucutshungulwa usuphothuliwe ngesikhathi esisodwa, ukunciphisa ukusebenza kahle futhi ikwazi workpiece ngenxa clamping yesibili, kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle machining.
Bangaphezu kuka-4) ukulawula multi-axis futhi multi-eksisi nokuxhumanisa ubuchwepheshe ukukhuthaza ikhono izingxenye umshini ithuluzi yokukhiqiza yinkimbinkimbi futhi machining kahle, umshini ukulawula ithuluzi inombolo kushaft-eksisi eziyisikhombisa, inani amathuluzi amandla amathuluzi kagesi ndawonye ukuze engaphezu kuka-20 .
5) ezishintshayo ocebile ukumisa, kufezwe injongo kakhulu ukusebenza ukuphathwa umshini komuntu oyedwa, ngaphezu bendabuko bar elihambayo, kudivayisi chip ukususwa yalo, njenge eside / esifushane workpiece workpiece impahla umamukeli, ithuluzi okuzenzakalelayo ngokumelene ummese, ohlakaniphile ukuhlonza, workpiece othomathikhi okuzivelelayo ukuhlolwa nokuhlolwa simiso ithuluzi zokugwema ukuphuka yimpumelelo e isicelo umkhiqizo, uye waqaphela ukuthi kukhushulwe izinga umshini ithuluzi ezishintshayo ezingeni kanye namadivayisi ukuqapha.
2.how mayelana Oku yokuthengisa support?
Oku yokuthengisa support
1, mahhala ukuhlinzeka izixazululo lobuchwepheshe amakhasimende. Ukuhlinzeka amakhasimende ngezisusa ukucutshungulwa uhlelo, kuhlanganise Ukukhetha umshini ithuluzi kanye ukumisa, esebenza kahle processing ubuchwepheshe, ukukhethwa ithuluzi, ukusika imingcele, izingxenye amahora, ukukhethwa chuck kanye nezinye izinsizakalo zokusebenza.
2, yonke le nqubo yokuthola, ekuphenduleni izinkinga abazalwane ababehlangabezana nazo amakhasimende e ukusetshenziswa imishini, ukuhlinzeka uhla egcwele services lobuchwepheshe kanye nokwesekwa amakhasimende.
3, mahhala ikhasimende opharetha ukunikeza uqeqesho. Okuqukethwe ukuqeqeshwa zihlanganisa umshini ithuluzi ukusebenza, izinhlelo, ukugcinwa kanye nokunye, ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa onekhono umshini amathuluzi.
4, ukuhlinzeka khulula umshini ukufakwa futhi ethuma kwikhasimende, entsha Ankai Corporation konjiniyela zokuthutha amakhasimende esiqokiwe ndawo, ngokuhambisana entsha ukwamukelwa umkhiqizo ukucaciswa ukufakwa Ankai umnyango amakhasimende ukunikeza on-site yokufaka nokuhlolwa umshini ukusebenza, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ukuthenga imikhiqizo kungenziwa ngqo asetshenziswa, nokuphelele umshini wokuhlola isiqinisekiso inkonzo.
3.how mayelana emva-ukudayiswa service?
> Nikeza ongakhetha imodeli lathe kwamakhasimende futhi isingeniso mayelana nezici kanye nezinzuzo zonke imodeli. Ncoma imodeli kufaneleka kakhulu ikhasimende kwepulani iningi cost-ephumelelayo.
> Nikeza professional kunazo ukuhlaziywa ubuchwepheshe, ukuxazulula izinkinga zazo amakhasimende ihlangabezane ekukhiqizeni, zivumela amakhasimende ungakhathazeki free.When kudingekile Sizosiza amaklayenti ukuqedela amasampula lapho kuyadingeka.
Sizonikeza ukufakwa khulula, inkonzo ukuqeqeshwa emva ukuthengwa amakhasimende ukuze uphathe umshini wembatha ukukhiqizwa ngokushesha.
Ngaphambi onjiniyela bethu ufike esikhumulweni inkampani yakho ukufakwa futhi ilungise inkinga amasevisi, sicela ulungele amalungiselelo ezilandelayo, ukuze onjiniyela bethu ngokushelela bangene emsebenzini ngemuva kokuhamba kwesikhathi.
1. Lungisa ezintathu okhombisa amandla 380V ukunikezela phansi ucingo, futhi bona esikhundleni eceleni ithuluzi lomshini ukukhwezwa ngokusebenzisa wire 2.5mm2, kangangokuthi onjiniyela bethu Ungaxhuma ukuba ithuluzi umshini ngemva kokufika, ukuphakela amandla ithuluzi umshini.
2. Lungiselela 0.5mpa umfutho womoya ezidingekile operation evamile ithuluzi umshini, ixhume esikhundleni eceleni ithuluzi umshini ngokusebenzisa φ8 emoyeni ipayipi.
3. Lungisa ukusika amafutha (ezifana Ross ahlabayo okumsulwa uwoyela A12) okwanele ngenqubo machining of ngokunemba lathe othomathikhi.
4. Lungisa umshini ithuluzi lubricating amafutha (ezifana Ross A32).